Brokoli gratin jiis - Recipe | Recipe
Alicia tomero | 20/11/2021 11:32 | Bilow, Liisaska carruurta, Recipes, Cunnooyinka la dubay, Cunnooyinka Khudaarta
Ku raaxayso cuntooyinka khudradda leh adigoo karinaya a brokoli caafimaad leh degdeg ah iyo abuurista gratin ah cajiib ah. Cuntadani waa dhakhso oo waad ku celin kartaa marar badan si ay u dhammaato. Waxa loo abuuray oo loo qaabeeyey si ay carruurtu u cunaan oo ay u helaan dhadhankeeda. Waa in la xusuustaa in ay ka mid tahay khudaarta ugu caafimaadka badan, waxaana ay qani ku yihiin Vitamin C.
Haddii aad jeceshahay suxuunta brokoliga leh waxaad isku dayi kartaa inaad noo sameyso brokoli iyo karootada jiiska.
1 broccoli yar
2 qaado oo caano ah
200 g oo mozzarella daaqay
Gacan muggeed oo turki ah ama ham taquitos ah
Gacan yar oo rooti ah
1 baradho dhexdhexaad ah
Digsi shiil leh oo saliid saytuun ah si aad u shiil baradho
Waxaan dhigay broccoli si loo kariyo Digsiga, waxaanu ku daboolnaa biyo oo ku dar milix yar. Waxaan sugi doonaa in ay noqoto mid jilicsan, waanu ka daadi oo waxaan dhignaa saxaarad taasi waxay aadi kartaa foornada.
In baaquli waxaan gelin Ukunta 3, waanu garaacnay oo ku darnay laba qaado oo caano ah. Waxaan ku darnaa qanjaruufo milix ah iyo basbaas. Waxaan ku tuurnaa broccoli oo ay la socdaan xabadaha turkiga ama ham.
Waxaan daboolnaa jiiska mozzarella oo daadi Dusha brokoliga, taasoo ka dhigaysa dhibco qaawan si ay u muuqdaan. Waxaan kula saydhaa Burcado rootiga.
Waxaan ku dhejinnay el foornada ilaa 180 ° ilaa aad aragto in ay sii ahaanayso gratin.
Waxaan dhignaa digsiga si aan ugu kululeyno saliidda saytuunka. Waanu diiray, nadiifinnaa oo jarnay baradhada xabadaha waxaanu shiilnay ilaa brown dahabka ah. Waxaan dul saareynaa maraqa broccoli. Waxaan u adeegnaa si kulul.
Wadada buuxda ee maqaalka: warqad dhakhtar » Liisaska carruurta » Brokoli gratin leh jiis